कामीरिताको नयाँ विश्व कीर्तिमान – Durbin Nepal News
कामीरिताको नयाँ विश्व कीर्तिमान आफ्नै रेकर्ड तोड्दै २३ औँ पटक सर्वोच्च शिखरमा
दूरबिन नेपाल १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:३६
काठमाण्डौ । कीर्तिमानधारी पर्वतारोही कामीरिता शेर्पाले २३ औ पटक सर्वोच्च शिखरको सफल आरोहण गर्दे गत वर्ष कायम गरेको आफ्नै कीर्तिमानलाई भङ्ग गरेका छन् । शेर्पाले बुधवार विहान ३ बजेर १५ मिनेटको समयमा सर्वोच्च शिखर पुगेका थिए ।
सोलुखुम्बुस्थित थामे निवासी ४९ वर्षीय कामिरिताले आफू २५ पटकसम्म निरन्तररुपमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने बताएका छन् । दूरबिनसँग कुरा गर्दै शेर्पाले भने “सरगरमाथा आरोहण प्रतिस्पर्धा नभई मेरो पारिवारिक बाध्यता हो ।”
यस अघि थामे निवासी आप्पा शेर्पा २१ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै यस वर्ष ३ सय ७५ पर्वतारोही सगरमाथा आरोहणको क्रममा रहेका छन् । यो हालसम्म कै उच्च आरोही सङ्ख्या रहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
22. Mt. Everest 8,848m 16/05/2018 S-Col SE Ridge
23. Mt. Everest 8,848m 15/05/2019 S-Col SE Ridge
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:३६ मा प्रकाशित